Homeसमाचारकुवेत पुगेर ड्युटीमा लागेको दुई दिनमै विरामी, डेढ महिनामा मृ*त्यु ! भावपूर्ण श्रद्धानजली
November 11, 2019 Spnews समाचार Comments Off on कुवेत पुगेर ड्युटीमा लागेको दुई दिनमै विरामी, डेढ महिनामा मृ*त्यु ! भावपूर्ण श्रद्धानजली
रोजगारीको लागि कुवेत पुगेका एक नेपालीको मृ*त्यु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका –२, सुकेडाँगी दाङका ३६ वर्षीय जबिन्द्र परियारको त्यहाँ पुगेको डेढ महिना नबित्दै उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो ।
परियार गत सेप्टेम्बर २७ तारिखका दिन मरिना थाई रेष्टुरेन्टमा कामका लागि कुवेत पुगेका थिए । दुई दिन मात्रै ड्युटी गरेका उनलाई एक्कासी टाउको दुखेपछि अक्टोबर २ तारिखमा फर्वानियाको अल सिफा अस्पातमा पुर्याईएको थियो । तर उनको त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि एक हप्तामा फर्वानिया अस्पातलमा रिफर गरिएको थियो ।
अस्पतालले जनाए अनुसार उनलाई मस्तिस्कमा क्षयरोग लागेको र लामो समय उपचार गर्दा पनि डाक्टरले बचाउन नसकेको मृ*तकका भाई शैलेन्द्र परियारले जानकारी दिएका छन् । परियारको शनिबार राती मृ*त्यु भएको हो । उनको घरमा एक छोरा र एक छोरी रहेको बताईएको छ ।